7 ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးဘွဲ့နှင့်ဘွဲ့ရရှိခြင်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >7ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးဘွဲ့နှင့်ဘွဲ့ရရှိခြင်း
လူပျိုကြီးဘ ၀ ကိုထူထောင်ခြင်းသည်ပါတီ၏အကောင်းဆုံးသောသူ၊ ဂုဏ်အသရေရှိသည့်အိမ်ဖော်တစ် ဦး ဖြစ်သည်. ဥရောပ၌ဆိုးသွမ်းသောစွန့်စားမှုတစ်ခုအတွက်အတူတကွစုရုံးနေခြင်းထက် ပို၍ ပျော်ရွှင်စရာဘာရှိနိုင်သည်? အထူးသဖြင့်အုပ်စုထဲမှကံကောင်းသူများမအခြေချခင်.
ဥရောပသည်ပါတီပွဲများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ငါတို့လက်ရွေးလိုက်တယ်7ဥရောပမှာအကောင်းဆုံးဘွဲ့နှင့်ဘွဲ့ရရှိခြင်း. ဇိမ်ခံ spa-themed ခရီးစဉ်ကနေတစ်ညလုံးပါတီနှင့်ဘားခုန်ရန်. ဒါကြောင့်, သတို့သမီးနှင့်သတို့သားအတွက်အကောင်းဆုံးစိတ်ကိုဖန်တီးနိုင်သည့်ခရီးကိုသင်ဖန်တီးရမည်.
1. Hedonistic ဘတ်ဂျက် - အဆင်ပြေဘာလင်အတွက် Bachelorette
ဘာလင်သည်၎င်း၏အရူးပါတီများနှင့် Oktoberfest ကြောင့်လူသိများပြီး၎င်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် တနင်္ဂနွေထွက်ပြေး. နာမည်ကြီး East Side Gallery တွင်ဂိုဏ်း၏အေးမြသောပုံများရရှိခြင်းအားဖြင့်သင်ပါတီပွဲကိုစတင်နိုင်သည်. ထိုအခါ, ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်အရက်ဆိုင်များလှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းသို့သွားပါသို့မဟုတ်စွန့်စားမှုရ ဘားခုန်သွားပါ. ထို့အပွငျ, ဘာလင်သည်အချို့သောအလွန်ကြီးစွာသော spa နေရာဖြစ်သည်, clubbing တစ်ညဥ့်ပြီးနောက်သင်အပေါငျးတို့သ hangover ထွက်ချွေးနိုင်ဘယ်မှာ.
2. အမ်စတာဒမ်သို့ Bachelorette / Bachelor Trip
နာမည်ဆိုးနှင့်ဆွဲဆောင်, အမ်စတာဒမ်ဥရောပရဲ့အပြစ်မြို့နှင့်အနည်းငယ်ပရဒိသုနှစ် ဦး စလုံးဖြစ်ပါတယ်. အကယ်၍ သင်သည်ဥရောပသို့နွေ ဦး သွားရန်စီစဉ်ထားပါက, ထို့နောက်အမ်စတာဒမ်သည်ချစ်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. တူးမြောင်းများ, ရောင်စုံနေအိမ်များနှင့်ချစ်စရာကဖေး, လမ်းကြောင်းစက်ဘီးစီး, နှင့်မေလအတွက်သင်တန်း၏ပန်းပွင့်ပွဲတော်. ဤအံ့ဖွယ်အမှုများအားလုံးသည်သတ္တမကောင်းကင်ဘုံတွင်သတို့သမီးကိုခံစားရစေလိမ့်မည်.
သို့သျောလညျး, အကယ်၍ မင်းကလွတ်လပ်ခွင့်၏နောက်ဆုံးအချိန်ကိုဆင်နွှဲရန်အရူးတနင်္ဂနွေကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်, ထို့နောက်အမ်စတာဒမ်သည်ရိုင်းစိုင်းသောလူပျိုကြီးပါတီအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. အနီရောင်မီးအိမ်များသို့ Muse Du Sexe မှစတင်ပါ, နှင့်သောက်စရာနှင့် striptease ညစာနှင့်အတူပြီးအောင်. ထို့ကြောင့်, အမ်စတာဒမ်သို့လူပျိုတို့၏ခရီးစဉ်သည်မမေ့နိုင်သောခရီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်.
3. ပရာ့ဂ်သို့ံ Bachelortte / Bachelor Trip
အဆိုပါမင်းသမီးကျိန်းသေပရာ့ဂ်ရဲ့လှပသောမြို့တော်အမြင်များကိုတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, နဲ့အနုပညာ. ဖြည့်စွက်ကာ, ပရာ့ဂ်သည်၎င်း၏ထိပ်တန်းဘီယာဥယျာဉ်များနှင့်ကော့တေးဘားများအတွက်လူသိများသည်. ဆိုလိုသည်မှာပရာ့ဂ်၏အရက်ဆိုင်များသည်အကောင်းဆုံးနေရာများတွင်ရှိပြီးဥရောပတွင်အရသာအရှိဆုံးနှင့်လိမ္မာပါးနပ်သောသောက်စရာများဖြစ်သည်, ဥပမာ, Hemingway ကော့တေးဘား. သင်အမှန်တကယ်ရိုင်းညဥ့်လိုလျှင်သောက်အနည်းငယ်, ပရာ့ဂ်ရဲ့ကမ္ဘာကျော်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် ဦး ခေါင်း နိုက်ကလပ်. ထိုနံနက် hangover ပျောက်ကင်းစေရန်, ပရာ့ဂ်မှာအကောင်းဆုံးကော်ဖီဆိုင်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ, ခွက်ကော်ဖီ. သူတို့ရဲ့အထူးကြွယ်ဝသောကော်ဖီအချိုရည်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အရသာအစားအစာ.
သို့သျောလညျး, သငျသညျအရက်တစ်ည၌သင်တို့၏စိတ်ကိုဆုံးရှုံးချင်ကြဘူးလျှင်, ထို့နောက်မြို့လယ်ခေါင်၏အပြင်ဘက်သို့ ဦး တည်ပါ. ပရာ့ဂ်သည်အပူနှင့်အငွေ့အမြောက်အမြားနေထိုင်ရာနေရာဖြစ်သည် ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဖြင့်ရဲတိုက်. ၎င်းသည်သတို့သမီးကိုမင်းသမီးလေးကဲ့သို့ခံစားစေပါလိမ့်မည် နတ်သမီးပုံပြင်. အမျိုးသားများအနေဖြင့်အလွန်ချစ်မြတ်နိုးရမည့်နောက်ထပ်ကြီးကျယ်သောအရာတစ်ခုမှာမြစ်ဖောင်ကူးခြင်းဖြစ်သည်.
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဗိသုကာ နှင့်ဒန်ညိုမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးပြေး, ဘူဒါပတ်စ်သည်လူပျိုနှင့်ခရီးသွားခြင်းအတွက်အံ့ဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်စေသည်.
အချိုရည်နှင့်ပါတီပွဲများသည်ဒူဘိုင်းမြစ်ကိုဖြတ်သန်းသည်, အံ့မခန်းဖွယ်ဗိသုကာအမြင်များနှင့်အတူမြို့ကိုဖြတ်ကူး, bachelorette နှင့် bachelor party အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. နောက်ရွေးချယ်စရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုမှာမိန်းကလေးများနှင့်ဇိမ်ခံ spa တစ်ခုတွင်အပန်းဖြေအနားယူခြင်းဖြစ်သည်. ဘူဒါပက်သည်မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်သည် အစားအစာခရီးစဉ်, Eger နှင့် Somlo မှအမျိုးသားဝိုင်ကိုစမ်း သုံး၍ ပွဲတစ်ခုတွင်ရိုးရာဟန်ဂေရီဟင်းပွဲများကိုမြည်းစမ်း။ နောက်ဆုံးဘဝကိုကျင်းပရန်.
Faust ဝိုင်မြေအောက်ခန်းသည်ဥရောပရှိရှေးအကျဆုံးမြေအောက်ခန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် အကောင်းဆုံးဝိုင်များကိုခံစားကြည့်ပါ အရသာခံအမဲသားနှင့်အခြားခဲဖွယ်စားဖွယ်များကိုမြည်းစမ်းပါ.
5. Tirol သို့ဘွဲ့ / Bachelorette ခရီးစဉ်
အများဆုံးစွန့်စားမှုနှင့် adrenaline- တိုးမြှင့်ဥရောပလူပျိုခရီးစဉ်သည်, သြစတြီးယားရှိ Tirol ဒေသသည်အကောင်းဆုံး ဦး တည်ရာဖြစ်သည်. သင်သည်မူလအစသို့ပြန်သွားသည်ဟုခံစားရပါလိမ့်မည်. မီးပုံပတ်ပတ်လည်ထိုင်, သစ်သားအခန်းအပြင်ဘက်မှာဆံပင်အဖျော်ယမကာနှင့်သောက်စရာများအတွက်. ဂိုဏ်းတစ်ခုတက်သည်ဆိုပါက ကျောက်တောင်တက်ခြင်း၏စွန့်စားမှု, အပျော်ဖောင်စီးခြင်း, နှင့်များစွာသောအခြားပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ, ထိုအခါ 47ရိယာ47, All-ယောက်ျားတွေရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နှင့် Grand Party အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်.
Tirol သည်လည်းလူပျိုခရီးအတွက်အဆင်ပြေပါသည်, သငျသညျအားကစားဖြစ်ကြပြီးအများဆုံးထဲကတစ်ခုမှာသဘာဝတွေ့ကြုံခံစားချင်တယ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့် လှပသောသောနေရာများ ဥရောပမှာ. Tirol ၏သစ်တောများနှင့်ရေတံခွန်များတွင်ထူးခြားသောအမြင်များနှင့်လတ်ဆတ်သောလေထုသည်ပေါင်းစည်းရန်နှင့်အမှတ်ရစရာအချိန်လေးများကိုဖန်တီးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
အဆိုပါရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအမြင်များ, တောင်များ, ချိုင့်ဝှမ်း, နှင့်ရေတံခွန်များ ဆွစ်တောင်တန်း Alps ဥရောပရှိအိပ်မက်ဆိုးများ၊. ဆွစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်းသည်စွန့်စားခန်းဂိုဏ်းအတွက်ပရဒိသုနှင့်ဒစ္စနေလန်းနှစ်ခုစလုံးဖြစ်သည်. ဥပမာ, သင့်အုပ်စုသည်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများကိုနှစ်သက်လျှင်, ထို့နောက်ဆောင်းရာသီရောက်လျှင်နှင်းလျှောစီးသွားနိုင်သည်. သို့မဟုတ်, သို့သော်ငြားလည်း, ကနွေ ဦး သို့မဟုတ်နွေရာသီခရီးစဉ်လျှင်, ထိုအခါ, တောင်တက်သမား, သို့မဟုတ်ချစ်စရာကောင်းသည့်ရွာတစ်ရွာ၌အေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းသည်ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနေရာတွင်လုပ်ဆောင်ရန်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်.
ဆွစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်းသို့လူပျိုနှင့်အပျိုစင်ခရီးစဉ်သည်ဘာလင်သို့မဟုတ်ပရာ့ဂ်သို့တနင်္ဂနွေခရီးထွက်ရန်ထက် ပို၍ စျေးကြီးနိုင်သည်။, သင်တစ်သက်တာကိုကြာရှည်စေသည့်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့်အမှတ်တရများကိုဖန်တီးရာနေရာလည်းဖြစ်နိုင်သည်.
ရထားများက Interlaken မှဘေဆယ်
ရထားများက Zermatt သို့ဂျီနီဗာ
ရထားများက Zermatt မှ Bern
ရထားများက Zermatt မှ Lucerne
7. ဘွဲ့ / Bachelorette ခရီးစဉ် Aquitaine, ပြင်သစ်
တစ်ဦးက bachelorette နှင့်ဘွဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုစွန့်စားမှုအပေါ်သွားကြဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်, အသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစား hectic လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုချိုးဖျက်. အဘယ်ကြောင့်စတိုင်၌ထိုသို့ပြုအပေါင်းတို့သည်လမ်းသွားနှင့် pampering အပေါ် splurge? Glamping သည်စိတ်ရှုပ်စေသောလူပျိုနှင့် bachelorette ခရီးအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ပြင်သစ်ကျေးလက်ဒေသသည်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည် စခန်းချနေရာအတွက်တည်နေရာ သင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောပြင်သစ်လယ်ယာမြေပေါ်ရှိမွန်ဂိုလူမျိုးများနေထိုင်သော Yurts တွင်.
ပြင်ပရေကူးကန်, သစ်သီး, အိပ်ရာထဲကမနက်စာပါ, မီးပုံ, နှင့်လှပသောတောင်များပတ်လည်စက်ဘီးအားလုံးလူတိုင်းမှတ်မိပါလိမ့်မယ်တစ် ဦး လူပျိုခရီးစဉ်နောက်ကျော -to- သဘောသဘာဝကင်းမဲ့သောအကြောင်းပါ. လူပျိုနှင့်ခရီးစဉ်များသည်လူတိုင်း၏ဘ ၀ များတွင်အလှပဆုံးအချိန်များဖြစ်သည်. ထို့ကြောင့်, ကမ္ဘာ့အလှဆုံးနေရာများတွင်ကျင်းပသင့်သည်။ ဥရောပသည်အိပ်မက်ဆိုးရိုင်းရိုင်းရိုင်းရိုင်းရိုင်းသောလူမိုက်နှင့်လူပျိုခရီးစဉ်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်.
ဒါဟာဥရောပတစ်ခွင်ခရီးသွားနှင့်လေ့ကျင့်ရန်လေ့ကျင့်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည် တစ်ဦးကရထား Save ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မဆို ဦး တည်ရာနှင့်မြို့ရန်7ဘွဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာများ.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးဘွဲ့နှင့်ဘွဲ့ရမှတ် (၇) ခု” ကိုသင်ဘလော့ဂ်ကိုတင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-bachelor-bachelorette-trips-europe/?lang=my ‎– (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
လူပျို bachelorandbachelorette မင်္ဂလာပါ BachelorettetripEurope ဥရောပ TravelAlps ပုဂံ travelswitzerland ခရီးသွားခြင်း